Ampianaro ny Zanakao mba Tsy ho Tia Miady
Mety ve ny Miady?
MAHAFANTATRA ankizilahy, na ankizivavy, miseho ho mafy be ve ianao?... Tianao ve ny miaraka aminy, sa aleonao miaraka amin’olona tsara fanahy sy tia fihavanana?... Hoy ilay Mpampianatra Lehibe: ‘Sambatra ny tia fihavanana, fa izy no hatao hoe zanak’Andriamanitra.’—Matio 5:9.
Indraindray anefa dia misy olona manao izay mampahatezitra antsika, sa tsy marina izany?... Amin’izay dia te hamaly ratsy isika. Izany no nitranga tamin’ny mpianatr’i Jesosy, indray mandeha, tamin’izy ireo hankany Jerosalema. Hotantaraiko aminao ilay izy.
Rehefa lasa lavidavitra izy ireo, dia naniraka mpianatra vitsivitsy i Jesosy, hialoha azy hankany amin’ny tanàna kely samaritanina, mba hangataka toerana hialany sasatra. Tsy tian’ny mponina hijanona tao anefa izy ireo, satria hafa ny fivavahan’ny Samaritanina. Tsy tian’ireo mponina ireo koa ny olona nandeha nivavaka tany Jerosalema.
Inona no tian’i Jakoba sy Jaona hatao mba hamaliana ratsy ny Samaritanina?
Inona no ho nataonao raha ianao no niharan’izany? Ho tezitra ve ianao, ka te hamaly ratsy?... Izany no tian’i Jakoba sy Jaona, hatao. Hoy izy ireo tamin’i Jesosy: ‘Tianao ve raha hiteny izahay mba hisy afo hilatsaka avy any an-danitra handevona azy?’ Tsy mahagaga raha nantsoin’i Jesosy hoe Zana-baratra izy mirahalahy! Nolazain’i Jesosy anefa fa tsy tokony hanao an’izany izy ireo.—Lioka 9:51-56; Marka 3:17.
Marina fa mety ho ratsy fanahy amintsika ny olona indraindray. Mety tsy havelan’ny ankizy hiara-milalao aminy isika. Mety hilaza mihitsy aza izy ireo hoe: “Mandehana any fa tsy namanay ianao.” Mety hahatezitra antsika izany. Mety ho te hamaly ratsy isika, nefa tokony hanao izany ve isika?...
Raiso ange ny Baibolinao, ary sokafy ao amin’ny Ohabolana toko faha-24, andininy faha-29 e! Izao no vakintsika ao: “Aza manao hoe: Araka izay nataony tamiko no mba hataoko aminy kosa, hovaliako ny olona araka izay nataony.”
Inona no tian’io andininy io holazaina, araka ny hevitrao?... Lazainy fa tsy tokony hamaly ratsy isika. Tsy tokony ho ratsy fanahy amin’ny olona isika, satria fotsiny hoe ratsy fanahy tamintsika izy. Ary ahoana kosa raha misy mila ady aminao? Mety hanompa anao izy mba hampahatezitra anao. Mety haneso anao izy ary hilaza fa saro-tahotra ianao. Raha lazainy hoe ‘kanosa’ ianao, inona no tokony hataonao? Hanaiky hiady ve ianao?...
Andeha hojerentsika indray izay lazain’ny Baiboly. Jereo ny Matio toko faha-5, andininy faha-39. Hoy i Jesosy ao: “Aza manohitra izay manisy ratsy anao; fa na zovy na zovy no mamely tehamaina ny takolakao ankavanana, atolory azy koa ny anankiray.” Inona no tian’i Jesosy holazaina, araka ny hevitrao? Te hilaza ve izy fa raha misy manisy totohondry ny takolakao iray, dia tokony havelanao hasiany koa ny iray?...
Tsy izany mihitsy no tiany holazaina. Tsy mitovy ny tehamaina sy ny totohondry. Mitovy kokoa amin’ny manosika ny manisy tehamaina. Mila ady ny olona manao toy izany. Ataony izay hampahatezitra antsika. Inona no hitranga raha tezitra isika ka manosika azy koa?... Azo antoka fa ho raikitra ny ady.
Tsy tian’i Jesosy hiady anefa ny mpianany, ka nolazainy fa tsy tokony hamaly izy ireo raha misy manisy tehamaina azy. Tsy tokony ho tezitra isika, ka hiady. Hitovy amin’ilay mila ady ihany mantsy isika raha mamaly azy.
Araka ny hevitrao, inona no zavatra tsara indrindra tokony hatao, raha misy mila ady aminao?... Miala eo. Na manositosika anao aza izy, dia ho reraka ihany amin’ny farany. Tsy hoe kanosa ianao raha miala eo, fa manaraka tsara ny fitsipika marina kosa.
Inona no tokony hataontsika raha misy mila ady amintsika?
Inona anefa no mety hitranga raha miady ianao ary maharesy?... Mety hiverina ilay olona resinao ary hitondra namana. Mety hoveleziny amin’ny hazo be ianao, na hotsatohany antsy ka haratra. Hitanao amin’izay ve hoe nahoana no tsy tian’i Jesosy hiady isika?...
Inona no tokony hataontsika raha mahita olona miady isika? Tokony hanampy ny iray ve isika?... Lazain’ny Baiboly izay tokony hataontsika. Jereo ny Ohabolana toko faha-26, andininy faha-17. Hoy izy ao: ‘Izay mandalo ka miditra amin’ny ady tsy azy, dia misintona alika amin’ny sofiny.’
Nahoana no mitovy amin’ny fisintonana sofin’alika ny fidirana amin’ny adin’olon-kafa? Aza manao izany fa mety haratra ianao!
Inona no hitranga raha sintoninao ny sofin’ny alika? Harary ilay alika ka hanaikitra anao, sa tsy izany? Raha manandrana miala anefa izy, dia vao mainka hotazoninao mafy ny sofiny, ary vao mainka ho tezitra izy amin’izay. Raha havelanao handeha indray izy, dia mety hokaikeriny mafy ianao. Ho vitanao ve anefa ny hitazona ny sofiny eo foana?...
Toy izany ny fahasahiranana ho hitantsika, raha miditra amin’ny adin’olon-kafa isika. Mety tsy ho fantatsika hoe iza no nanomboka ilay ady, ary inona no antony niadiany. Mety ho voadaroka ilay iray, nefa angamba izy nangalatra ny zavatr’ilay miady aminy. Raha manampy azy isika, dia hanampy mpangalatra, nefa tsy mety izany.
Inona izany no tokony hataonao raha mahita olona miady ianao?... Afaka mihazakazaka miantso ny mpampianatra ianao, raha any am-pianarana. Raha any an-toeran-kafa kosa, dia afaka miantso an’i Dada na Neny, na ny polisy ianao. Tokony ho tia fihavanana isika, na mila ady amintsika aza ny olona.
Inona no tokony hataonao raha mahita olona miady ianao?
Miezaka mafy ireo tena mpianatr’i Jesosy mba tsy ho tafiditra amin’ny ady. Asehontsika amin’izany fa manaraka ireo fitsipika marina isika. Lazain’ny Baiboly mantsy fa ‘tsy mety raha miady ny mpianatr’i Jesosy, fa halemy fanahy amin’ny olona rehetra.’—2 Timoty 2:24.
Andeha isika hijery torohevitra tsara, hanampy antsika handositra ny ady: Romana 12:17-21 sy 1 Petera 3:10, 11.
Mihavana Amin’i Lota i Abrahama
Jereo ny tsy ampy eo amin’io sary io, ampifandraiso ireo teboka, ary lokoy ny sary.
Tsy Aleo ve Mihavana?
Tena mandaitra ny torohevitry ny Baiboly rehefa ampiharina. Na ny mpifahavalo aza lasa mpinamana be.
Hizara Hizara Mety ve ny Miady?
Tahafo i Jesosy dia ho Afa-po Amin’ny Fiainana Ianao!